Gebze Halkalı Marmaray Hattı Ne Zaman Açılacak? – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGebze Halkalı Goorma ayaa la furayaa Khadka Marmaray?
28 / 02 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
gebze ring marmaray marka ay noqon doonto mid deg deg ah
Gebze - Halkalı Goorma ayaa la furi doonaa khadka Marmaray? Gebze wuxuu bilaabay daraasad waxbarasho Halkalı waxay la yaaban tahay marka khadka la heli karo. Marmaray wuxuu si fudud u heli doonaa malaayiin muwaadiniin ah tan iyo markii la furay. Iyo Gebze-Halkalı Goorma ayaa la furi doonaa khadka Marmaray? Maalintee? halkan Halkalı-Gebze Marmaray oo joojiya dhammaan faahfaahinta-
Gaadiidku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan magaalooyinka waawayn iyo magaalooyinka sida Istanbul. Sababtan awgeed, Istanbul waxay rajeynayaan dhammaan noocyada adeegga gaadiidka kuwaas oo awood u siinaya inay si deg-deg ah ugu shaqeeyaan shaqooyinkooda iyo guryahooda. Gebze-Halkalı Marmaray Line waa mid ka mid ah. Sida laga soo xigtay wargayska Hülya Çaylak, khadka ayaa la qorsheeyey markii ugu horreysay bishii Maarso, 10 185 76 km, oo hore u ahayd Gebze- Halkalı Habka u dhexeeya wuxuu yarayn doonaa daqiiqadaha 115. Gebze-Halkalı Muwaadiniinta hela suurtogalnimada in ay tagaan aan joogsi lahayn, saacadaha 1 waxay badbaadin doonaan saacadaha 10.
Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme- Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy- Halkalı Ka dib markii khadka marmaray la bilaabi doono, 75 bin ayaa lagu rari doonaa hal dhinac isla markaana 96 waxay qaadi doonaan rakaab ah 1.2 million rakaab maalin kasta. Saldhigyada qaar ee xarunta 28, oo loo qorsheeyay in ay u safraan 43 saacaddiiba, tareenada aasaasiga ah iyo tareenada xawaaraha sare waxay sidoo kale joojin doonaan. Marka la dhammeeyo, khadka la isugu dhejin doono gawaarida iyo taraamka ee Istanbul ayaa la qorsheynayaa in ay si aad ah u nastaan ​​xeebta iyo E-5 taraafikada labada dhinac ee magaalada.
Total 1.4 bilyan oo Euro ah (ku dhowaad 8.3 billion pounds) inay line cusub waa kharash-Üsküdar-Sirkeci dhexeeya daqiiqo 4, Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme ka daqiiqo 13.5, Söğütlüçeşme- Yenikapı 12 daqiiqo ku soo laaban doona Bostancı- Bakırköy ka daqiiqo 37. 170 dhererka kiiloomitir nidaamka tareenka ee Istanbul, laga bilaabo Gebze Halkalı233 iyada oo lagu daro xarumaha xaafadaha magaalada ee loo yaqaan "Railways" ayaa tagi doona kiiloomitir.
Taksim-4 ilaa nidaamka galka hoose ee dhulka hoostiisa. Iyada oo la furayo xariiqda "Levent" ee 2000, shabakada nidaamka tareenada ee Istanbul ayaa gaartay ilaa 170.05 illaa sannadkii hore. Railways ayaa la rajeynayaa in ay si aad ah u fududeyso gaadiidka Istanbul, iyada oo laynka cusub ee 110.60, kuwaas oo dhismaha lagu dhisayo, kuwaas oo loo qorsheeyay in ay adeegaan sanadkaan. Magaalada Istanbul, oo ah maalgelinta gaadiidka oo aan la sii wadin, waxaa la qorsheynayaa in ay ku xirto dhammaan degmooyinka leh maalgalinaha shidaalka. Iyadoo laynka cusub, gaadiidka ka socda bartamaha magaalada iyo meelaha fogfog ayaa fududeyn doona.
PENDİK TO LONDON
Goobta mashruuca, Gebze-Söğütlüçeşme iyo Halkalı- Khadadka Kazlıçeşme waxaa lagu biirin doonaa Marmaray iyadoo isku xirka tareenka laga dhisi doono inta u dhexeysa Aasiya iyo Yurub. Intaa waxaa dheer, Gebze, Pendik, Maltepe, Bostanci, Sogutlucesme, Haydarpasa, Bakirkoy iyo Halkalı tareenka xawaaraha sare ee saldhigyada. Tareenada xamuulka ahi waxay ku xiran yihiin Pendik oo ka yimaada London iyadoo loo marayo xarun jidka tareenka ah. Khadka xaafadaha ayaa sidoo kale lagu xirayaa xarumaha tareenka iyo taraamka.
XIDHIIDHA LAGA HELO
Gebze-Halkalı Marka Marmaray Khadka la dhammeeyo Halkalı ka idaacadda Halkalı- Subway Airport-ka Istanbul iyo Yenikapi Halkalı Laga bilaabo Küçükçekmece ilaa Yenikapı-Hacıosman, laga bilaabo Yenikapı ilaa Yenikapı-Atatürk Line, laga bilaabo Ataköy ilaa İkitelli-Ataköy, laga bilaabo Bakırköy ilaa Bakırköy-Başakşehir line, Göztepe ilaa Göztepe Ü, Ü Laga soo bilaabo Bostanci ilaa Bostanci-Dudullu, laga bilaabo Ayrilik Fountain ilaa khadka Kadikoy-Tuzla, laga soo bilaabo Pendik ilaa Pendik-Sabiha Gokcen iyo Tuzla ilaa khadka Kadikoy-Tuzla, Sogutlucesme ilaa Tunnel weyn ee Istanbul iyo min Sirkeci ilaa Kabatas-Bagcilar tram lagu biirin doonaa khadka iyo badda.
ESNAF WAA BADBAADO
Mashruucan waxaa laga filayaa kaliya maaha in uu baabi'iyo gaadiidka laakiin sidoo kale wuxuu abuuri karaa dhaqdhaqaaqyada degmooyinka halkaa laga dhiso. Tusaale ahaan, Bostanci, Suudiye iyo Goztepe ayaa istaagay, khaasatan dukaamada dhowaan la xidhay ee ajandaha leh ee Bagdat Street la filayo inay soo nooleeyaan. Xirfadaha ayaa sugaaya inay istaagaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah iyo gaadiidka dadku uu kordho isla markaana dhaqdhaqaaqa isku mid ah ayaa laga yaabaa in degmooyinka oo dhan.
Gebze - Halkalı Waxaa jira wadarta joogtada ah ee 42 ee xariiqda. Halkan waa wadada xariiqda;
Gebze, (magacyo hore: Dakibyza iyo Libyssa), waa degmo ka tirsan Kocaeli. Waa mid ka mid ah magaalooyinka waawayn ee magaalada Marmara.
Taariikhda ugu caansan ee gobolka Bitinya, oo ay ku jiraan Gebze, waxay dib ugu noqdaan XII. qarnigii. Jasiiradda Kocaeli, oo ah albaabka ugu muhiimsan ee u dhaxeeya Aasiya iyo qaarada yurubiyanka, waxay ahayd meel ay dad badani ka soo tageen gurigooda ama ay ka tageen raadkooda ay qabteen. Xogta ugu horreysa ee qaran waa tan 12. The Phrygians horraantii 20aad. The Phrygians, kuwaas oo u yimid jasiiradda dhex maraya Bosphorus, ayaa laga sii daayey halkan oo ay u dhaxeysay Anatolia.
Halkee Gebze Maanta, BC-sano 281 BC ah by King Nicomedes lahaa Bithynians muddo Dakibyz iyo Libyss magacaabay dejinta wakhtiga. Sababta ugu muhiimsan waxay tahay in maadada cilmi aagga this la deggan yahay, caan Taliyaha Carthaginian Hannibal ayaa ku yaal halkan inta lagu guda jiro boqortooyada. Hannibal, Zama loo arkay inay dalka ka dib guuldaradii dagaalka iyo lahaa in ay qaataan ka magangal boqortooyada xabaashii Bitinya kalmıştır.hannibal ayaa waxa uu ku yaalaa Gebze TUBITAK Campus. Evliya Celebi uu safarka 1640 1000 ku xiran in Gebze iyo beerta sheegay in guriga jir-style ah.
Sida ku cad natiijada tirakoobka 1997, tirada guud ee dadweynaha gobolka Kocaeli waa 1.175.190 iyo dadweynaha Gebze waa 402.916. Sida ku xusan 1997, degmadu waxay ka dhigan tahay 34.28 tirada guud ee dadweynaha Kocaeli. In 1965 33 ah kun ee dadka Turkiga ee ku noolaa magaalooyinka, tiradaasi ayaa 1997 40.2 kun. heerka guud ee dadweynaha koritaanka ee Turkey u dhexeeya 1965-1997 sano 100.8%, halka Gebze, iyo kororka this ayaa 111.8%. 2008 500.000 2013 sano ka hor doorashooyinka maxalliga ah ee ka badan kun qof, ka hor doorashooyinka degmooyinka Gebzein Daaric, Cayirova iyo Dilovasa oo ka tegey Gebze. Sida laga soo xigtay ADNK oo ay samaysay TURKSTAT, dadka degmada Gebze waxay ahaayeen 329.195 kun dhamaadkii 642.726.
HalkalıWaa degmada degmada Kucshimmece ee degmada. Halkalı Xaruntu waxay daboolaysaa aagga xaafadaha Station iyo Atakent. Quarter Central wuxuu leeyahay magaaleyn aad u kala duwan oo la jebiyey. Atakent Mahallesi waxay leedahay dhisme joogto ah oo leh TOKİ. (Süperhab waa)
Gebze-Halkalı Goorta la Bilaabayo Qadka Bannaanka
Dayactirka Wadada Laamiyada Marmaray…
Goorma ayaa Gebze Haydarpaşa Khadka Furan Furan
Maalgalinta Metro waa Istanbul
Gebze - Halkalı Marmaray Line Waxay Furan Yihiin
Gebze Halkalı wadada khadka
Gebze Halkalı marmaray wadada
Halkalı- Madaarka Istanbuul
Shaqaalaha YHT ayaa xiran lacag la'aan